Instagram-ka ayaa ka digaya adeegsadayaasha in laga yaabo in la mamnuuco - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Instagram-ka ayaa ka digaya adeegsadayaasha in laga yaabo in la mamnuuco
Instagram ayaa ka digtay in dadka laga yaabo in la mamnuuco
TELES RELAY 20 July 2019
Shirkadda Instagram ayaa ka hirgalinaysa dhowr isbadal oo ku saabsan maareynta akoonnada isticmaaleyaasheeda. Tan waxaa ka mid ah ogeysiinta akoonnada ay u badan tahay in la mamnuucay.
Instagram ayaa faahfaahin ka bixisay qaar ka mid ah isbeddelada ku yimaada siyaasadeeda deacinta. Xisaabaadka leh boqolkiiba xadidan waxyaabaha la mamnuucay waa naafo. Maanta, marka lagu daro mamnuucista akoonada, Instagram wuxuu ku dhawaaqayaa in akoonada tiriya tiro dhowr ah oo xadgudubyo siyaasadeed waqti cayiman sidoo kale la mamnuuci doono.
Instagramka waxay xoojineysaa sharciyadeeda ku saabsan mamnuucida akoonnada
Nidaamka ayaa sheegaya in isbedeladan si habsami leh ay u maareyn doonaan akoonnada isticmaaleyaasha isla markaana ay noqon doonaan kuwo ku-dheelitirnaan marka loo eego mas'uuliyadaha u saamaxaya isticmaaleyaasha, waa daabacaadyadooda ku saabsan sawirradan wadaagista shabakadda. Tan si Instagram u sii ahaato meel wanaagsan qof walba.
Instagram-ka ayaa sidoo kale soo bandhigaya hannaan cusub oo ogeysiin ah oo loogu oggolaanayo dadka isticmaala inay sifiican u fahmaan xaaladda haddii ay dhacdo in koontadooda laga mamnuuco. Ogeysiisyadan ayaa cayiman doona waxyaabaha aan ixtiraamaynayn shuruudaha loo adeegsan karo sidoo kale way suurtogal noqon doontaa, tan, inay rafcaan ka qaaddo wixii la tirtiray.
Oo wuxuu fududeeyaa habraaca cabashada ka dib marka la tirtiro waxa ku jira
Wicitaannadan ayaa marka hore quseeya kaliya waxyaabaha la tirtiray ee qaawan iyo qaawan, hadalka nacaybka, kadeedista, iibinta daroogada iyo la-dagaallanka argagixisada. Waxay ku dabbaqi doonaan noocyada kale ee xadgudubyada bilaha soo socda. Haddii boostar si qalad ah loogu tirtiro, Instagram ayaa soo celin laheyd oo meesha ka saaraysa xadgudubka siyaasadaha akoonka isticmaalaha la xiriira.
Tijaabadada Xiisaha Leh ee loo yaqaan 'Instagram Likes Concealment Test' waxay ku sii fideysaa Wadamo Badan
Instagram ayaa adeegsata sirdoon macmal si ay u shaandheeyaan hadalada foosha xun
Isticmaalayaasha Internetka ayaa ka tagaya Facebook ee Instagram
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/instagram-avertit-les-utilisateurs-susceptibles-detre-bannis-322919
Goobta korontada ku shaqaysa ee Lotus Evija waxay ku soo baxaysaa daqiiqado 9
Laga soo bilaabo Lidar ilaa Sensor Proximity: Sidee ayay ubaxyada robotku dhab ahaan isku filnaadaan? - Tech - Numerama